नागरिकहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेराको धारणा OMG समाधानहरू
नागरिकहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेराको अवधारणा
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू तातो विषय बनेका छन् किनकि उनीहरूको डिप्लोमेन्ट संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतमा विगत केही वर्षहरूमा देखिएको थियो। धेरै व्यक्ति कानून प्रवर्तन सहयोग मा यसको भूमिका प्रश्न गरेका छन्। खैर, त्यहाँ कुनै श is्का छैन कि यी क्यामले अपराध दर कम गर्न मद्दत गरेको छ। तर मानिसहरू यी क्यामहरूबारे के सोच्दछन् र उनीहरूको बारेमा उनीहरूको धारणा के हो सोच्नु पनि एक प्रश्न हो। यस लेखले के हुन् भन्नेमा विस्तृत नोट राख्नेछ शरीरमा लगाएको क्यामेराको बारेमा नागरिकको धारणा.
शरीर लगाएको क्यामेराको बारे नागरिकको धारणा:
शरीरमा लगाएका क्यामेरा (पछि BWCs) पुलिस र नागरिकहरू बीच मुठभेडको अडियो र भिडियो रेकर्डि। क्याप्चर गर्न प्रयोग गरिन्छ। हालका वर्षहरूमा, BWCs संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरू जस्ता धेरै देशहरूमा पुलिस एजेन्सीहरू द्वारा तैनात गरिएको छ। BWCs मुख्यतया प्रहरी भेदभावपूर्ण व्यवहार र हिंसात्मक मुठभेडहरू (उदाहरणका लागि, नागरिकहरूको पुलिसको गोलीबारी) लाई रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, पुलिस र नागरिकहरू बीचको अन्तरक्रियाको गुणस्तरलाई बढावा दिन्छ, र प्रहरीको साथ नागरिकहरूको विश्वास बढाउँदछ।
सभ्यताको प्रभाव जनतामा देखिएको थियो। अध्ययनले देखाउँदछ कि मानिसहरू टेप गरिरहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदा कम भाग्ने सम्भावना कम छ। BWCs तैनाती पछि व्यक्तिप्रति व्यवहारले पुलिसतर्फ महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। क्यामेरा लगाएका अफिसरहरूका विरुद्ध गुनासोहरूमा वास्तवमै उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो। हामी or 88 वा percent ० प्रतिशतको अर्डरमा कुरा गरिरहेका छौं। अफिसरहरू असभ्य वा अनुचित व्यवहारमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुन्छ, र नागरिकहरू आक्रामक र प्रतिरोधी हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यो साँच्चिकै उल्लेखनीय छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा पुलिस मा विश्वास को एक महत्वपूर्ण लाभ पाइएको छ। पुलिस अफिसरहरू अनुगमन भइरहेको हुँदा मानिसहरू प्रहरीको वरिपरि सुरक्षित महसुस गर्दछन्। प्रहरी दुराचारको घटनाहरुमा ठूलो संख्यामा कमी आएको छ। शरीरमा लगाएका क्यामेराले हाम्रो वरिपरि राम्रो कानून व्यवस्थाको निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ।
भ्रष्टाचार मा कटौती:
प्रहरी अधिकारीहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको हुँदा प्रहरी विभागमा घूस र भ्रष्टाचारका अन्य प्रकारहरू पनि कम देखिए। सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले राहत पाउँदछन् किनकि उनीहरूले उनीहरूको समस्याको समाधानलाई समाधान गर्न सक्छन् उनीहरूको मेहनतको पैसालाई घूसको रूपमा खर्च नगरी।
यी चीजहरू सबल प्रमाण हुन् कि जनता यी ग्याजेटहरूको पक्षमा छन् किनकि उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्य र पैसाको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्छन्। शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू सम्बन्धी नागरिकको धारणाको विस्तृत विश्लेषण माइकल डी व्हाइट, न्याटली तोडक, जेन्ने ई गौबले दिएका थिए।
यस कागजको उद्देश्य BWC- रेकर्ड गरिएको पुलिस मुठभेड भएका नागरिकहरू बीच शरीरमा लगाएको क्यामेरा (BWCs) को धारणा आकलन गर्नु र नागरिकहरूको व्यवहारमा सभ्य प्रभावको सम्भाव्यता पत्ता लगाउनु थियो। जूनदेखि नोभेम्बर 2015 सम्म, लेखकहरूले स्पोकेन (डब्ल्यूए) मा 249 नागरिकहरूसँग टेलिफोन अन्तर्वार्ताहरू लिएका थिए जसलाई BWC रेकर्ड गरिएको पुलिस भेट भयो। उत्तरदायीहरू पुलिस मुठभेडमा उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गरियो भन्नेमा सन्तुष्ट थिए र समग्रमा BWCs बारे सकारात्मक धारणा थियो। यद्यपि, केवल 28 प्रतिशत उत्तरदाताहरू वास्तवमै उनीहरूको आफ्नै भिडन्तको बेला BWC बारे सचेत थिए। लेखकहरूले सभ्यताको प्रभावको कम प्रमाण पनि फेला पारे तर BWC को चेतना र प्रक्रियात्मक न्यायको बृद्धि भइरहेको बिचमा महत्वपूर्ण, सकारात्मक सम्बन्ध रहेको कागजात गरे।
शरीरमा लगाउने क्यामेराको नकारात्मक पक्ष - गोपनीयता उल्ल .्घन
स्पष्ट रूपमा, कहिलेकाँही नागरिकहरूले गोपनीयताको अपेक्षा राखेका हुन्छन जुन सम्भावित रूपमा पुलिस अधिकारीले शरीरमा लगाउने क्यामेराको प्रयोगबाट उल्ल .्घन गर्न सक्छ - बच्चाको अन्तर्वार्ता, यौन दुर्व्यवहार पीडितको अन्तर्वार्ता, उदाहरणका लागि। ... हुनसक्छ एक पुलिस अफिसरले एक गोप्य जानकारीकर्ता वा अन्य कसैले कुरा गर्दैछ आपराधिक गतिविधिमा बुद्धिमत्ता प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै। जब त्यो मुठभेड रेकर्ड हुन्छ, यो धेरै स्थानहरूमा, एक सार्वजनिक कागजात हुन्छ कि नागरिकहरू, प्रेस द्वारा र पक्कै पनि अभियोजक द्वारा अनुरोध गर्न सकिन्छ।
यो स्पष्ट छ कि पुलिस अधिकारीहरू र पुलिस युनियनहरू विश्वव्यापी रूपमा यस प्रविधिलाई अँगालेका छैनन्। उनीहरूसँग चिन्ता छ कि क्यामेरा कहिले र बन्द हुन्छ, जब सुपरभाइजरहरू जान्छन् र फुटेज समीक्षा गर्न सक्छन्। र त्यसोभए, सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा, तपाईं कसरी यी डाटा क्यामेरा अफिसर द्वारा उत्पन्न भिडियो डाटा को जबरजस्त भण्डार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
कायम गर्न मानक:
त्यहाँ जहिले पनि बहस भइरहेको हुन्छ क्यामेरा कहिले खोल्नुपर्दछ वा कहिले बन्द हुन्छ। तिनीहरूले कस्तो प्रकारको डाटा भेला गर्नुपर्नेछ र कस्तो प्रकारको डाटा बचत गर्नुपर्दछ? यी प्रश्नहरू वास्तविक सम्झौता हो, नागरिकहरूको गोपनीयतालाई उल्ल .्घन गर्नु हुँदैन यस बीचमा हरेक मुठभेड रेकर्ड गरिनु पर्छ। ती रेकर्डि ?हरूमा कसले पहुँच गर्न सक्दछ? के अभियोजन पक्षले त्यो प्रमाण अदालतमा प्रयोग गर्न सक्छ? ठिक छ, यी सबैको उत्तर अहिले सम्म जवाफ दिइएको छैन। कानून प्रवर्तनका अधिकारीहरू यसमा प्रोटोकल तयार गर्न काम गरिरहेका छन् जुन सबैको लागि उपयुक्त छ। केहि मापदण्डहरू जुन अहिले पछ्याईदै छ यसका रूपमा छन्:
कुनै फरक पर्दैन, शरीरमा लगाएको क्यामेराको उपयोगका लागि के मापदण्ड वा नीति बनाइएको हो, कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले अनुसरण गर्नु पर्ने एउटा कुरा भनेको सार्वजनिक गोपनीयताको उल्लंघन गर्नु हुँदैन। विश्वासमा भनिएका सबै कुरा गोप्य रहनु पर्छ। हामी आशावादी छौं कि यी उपकरणहरूले हाम्रो स्थानीय पुलिस र अन्य राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई सकेसम्म कम आपराधिक दरहरूको साथ एक विश्व निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ।
नागरिकहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेराको अवधारणा पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: सेप्टेम्बर 26th, 2019 by व्यवस्थापक
3000 कुल दृश्यहरू2हेराइ आज